कतार एयरलाइन्सबाट नेपाल आएका ३ जनामा फेरी कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि, को हुन् उनीहरु - Alert Khabar
Homeसमाचारकतार एयरलाइन्सबाट नेपाल आएका ३ जनामा फेरी कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि, को हुन् उनीहरु
कतार एयरलाइन्सबाट नेपाल आएका ३ जनामा फेरी कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि, को हुन् उनीहरु
काठमाडौं । कतार एयरलाइन्सको जहाजमार्फत मार्च १७ अर्थात चैत ४ गते नेपाल आउने ३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेको पुष्टि भएको छ ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा बिहीबार गरिएको परीक्षणमा कतारबाट आएका थप एक जनामा कोरोनाको संक्रमण रहेको पुष्टि भएसँगै सो विमानमा नेपाल आउनेमध्ये तीन जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेको पुष्टि भएको हो ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा बिहीबार गरिएको परीक्षणमा कतारबाट आएका थप एक जनामा कोरोना पोजेटिभ भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । संक्रमितबारे मन्त्रालयले थप जानकारी दिएकाे छ । चैत ४ गतेको कतार एयरलाइन्सको क्यूआर ६५२ नम्बरको फ्लाइटमा उनीहरु नेपाल आएका थिए भने सो विमानमा २०५ जना यात्रु थिए ।
यसअघि चैत १० गते दोहाबाट सोही फ्लाइटमा नेपाल आएकी एक युवतीमा कोरोना पुष्टि भएको थियो । १० गते संक्रमण पुष्टि भएकी युवती फ्रान्सबाट कतार ट्रान्जिट हुँदै नेपाल आएकी थिइन् । यस्तै शनिबार पनि सोही बेल्जियमबाट दोहा ट्रान्जिट हुँदै नेपाल आएकी युवतीमा पनि कोरोना पुष्टि भएको थियो ।
कतारको दोहाबाट स्थानीय समय अनुसार मार्च १७ को बिहान ३ बजेर ५ मिनेटमा उडेको एअरवेजको जहाज मार्च १७ को बिहान १०ः३० बजे नेपाल आइपुगेको थियो । स्वास्थय मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ११८४ वटा नमुना परीक्षण भएको र त्यसमा आजको समेत गरी ६ जनामा कोरोना पोजेटिभ भेटिएको छ ।
के हो त कोरोना भाइरस ?
जनवारबाट सर्ने एक रहस्यमयी भाइरस हो यो । यो भाइरस गएको डिसेम्बरमा पत्ता लागेको थियो । कोरोना भाइरस विभिन्न प्रकारका छन् । यसअघि ६ प्रकारको भाइरस मात्र मान्छेमा संक्रमण हुन्छ भनिन्थ्यो ।
अहिले भने त्यसभन्दा फरक नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस फैलिएको हो । यसले मान्छेमा संक्रमण गर्ने क्षमता अरु कोरोना भाइरस भन्दा तिब्र एवं धेरै छ । स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुले यो निकै भयानक रहेको बताइरहेका छन् ।
कसरी थाहा पाइन्छ ?
जाडोको मौसम छ । यतिबेला रुघाखोकी लाग्नु सामान्य मानिन्छ । जबकी कोरोना भाइरसले संक्रमण गरिसकेपछिको सुरुवाती लक्षण पनि यस्तै हुन्छ । त्यसैले यसबाट कतिपय झुक्किन सक्छन् । रुघाखोकी जस्तै लागेपनि यो सामान्य रुपमा रहँदैन । त्यसपछि क्रमस उच्च ज्वरो आउँछ, टाउको दुख्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ ।
कतिपय अवस्थामा यसबाट मृत्यु समेत हुन्छ । यसको डरलाग्दो पक्ष के भने, यो भाइरस एउटा प्रजातिको जीवबाट अर्कोमा सजिलै सर्छ । यसरी सर्दैसर्दै मान्छेसम्म पुग्छ ।
यसबाट सुरक्षित रहनु भनेको अहिलेको अवस्थामा सजग र सतर्क रहनु नै हो । रुघाखोकी लागेको व्यक्तिको सोझो सम्पर्कमा नरहने, भिडभाडमा सावधानी अपनाउने, सरसफाईमा विशेष ध्यान दिने नै हो ।
उपत्यकामा ड्रोनबाट लकडाउन निगरानी
लकडाउनका समयमा मानिसहरुको चहलपहल र आवतजावको निगरानीका लागि काठमाडौंमा ड्रोनको प्रयोग गरिएको छ । उपत्यका भित्र लकडाउनका समयमा पनि मानिसहरुको चहलपहल नरोकिएपछि प्रहरीले निगरानीका लागि ड्रोनको प्रयोग गरेको थालेको हो ।
विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्नका लागि भन्दै सरकारले लकडाउन गरेको छ । तर मानिसहरुको चहल पहल र आवतजावत पूर्ण रुपमा रोकिएको भने छैन ।
लकडाउनका समयमा मानिसहरु बाहिर निस्कने र संक्रमणको जोखिम रहने भन्दै प्रहरीले चारवटा ड्रोनका माध्यमबाट उपत्यका विभिन्न १५ स्थानहरूको गतिविधि अनुगमन शुरु गरेको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक(एसएसपी) उमेश प्रसाद जोशीले विभिन्न स्थानको अनुगमन ड्रोनको प्रयोग गरिएको जानकारी दिए ।
‘कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) संक्रमणको कारण नेपाल सरकारद्वारा घोषणा गरिएको देशव्यापी लकडाउन अनुगमनको लागि नेपाल प्रहरीले ड्रोनको समेत प्रयोग गरेको छ ’उनले भने,देशव्यापी आवतजावत एवम् यातायात संचालनमा रोक (लकडाउन) अनुगमनको लागि ड्रोनको प्रयोग गरी काठमाडौं उपत्यकामा अनुगमन शुरु गरिएको हो ।’
अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबै स्थानमा प्रहरी पुग्न नसक्ने भएका कारण ड्रोनको प्रयोग गरिएको उनले जानकारी दिए । यसको प्रयोगले मानिसहरुले सामाजिक दूरी कायम गरेका छन् वा छैन र कुन क्षेत्रमा मानिसहरु र सवारीसाधनको उपस्थिति कस्तो छ भन्ने कुराको अनुगमन गर्न फाइदा पुग्ने उनले बताए ।
‘ड्रोनको प्रयोगमार्फत् सर्वसाधारणको भीड युक्त स्थान तथा गाडीको आवतजावत भएको भए त्यसलाई रोक्न सहज हुन्छ ।’ उनले भने । कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलनबाट रोक्नका लागि नेपाल सरकारले अत्यावश्यक सेवाबाहेक अरू कामका लागि घरबाहिर निस्कन नपाउने गरी चैत्र ११ देखि २५ सम्मका लागि ’लकडाउन’ गर्ने आदेश जारी गरेको छ ।
तर मानिसहरु भने सडकममा निस्किइरहेका छन् । दैनिक जसो प्रहरीले सयौंका संख्यामा मानिसहरुलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । प्रहरीले चारवटा ड्रोनको प्रयोग गरेर १५ स्थानको अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । जसमा मानिसहरुको धेरै उपस्थिती हुने मुख्य चोकहरु रहेका छन् ।
कलंकी, कालीमाटी,बल्खु, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, बानेश्वर, गौशाला, चावहिल, चक्रपथ, नयाँ बसपार्क, ग्वार्को, लगनखेल, सातदोवाटो, मैतिदेवी र रत्नपार्कमा ड्रोन परिचालन गरिएको छ । ड्रोनको प्रयोग सामाजिक दूरी कायम राख्न समेत फाइदाजनक हुने प्रहरीको विश्वास छ ।